Last Empire - War Z: Strategy 1.0.257 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.257 လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Last Empire - War Z: Strategy
Last Empire - War Z: Strategy ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကမ္ဘာ့ဖလား Boss ကြွလာရဲ့မီးအာရုံစူးစိုက်ပါစေ!
လူအစုအဝေးတို့ကိုစုသိမ်း! ဒါဟာ killin အချိန်ပဲ!
နောက်ဆုံးအင်ပါယာ၌သင်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုခိုးယူဖို့လိုလားသောဖုတ်ကောင်စစ်တပ်ပစ်ခတ်မှုနှင့်အပြင်းအထန်ဖြင့်သင့်အင်ပါယာကာကွယ်ပါ - War Z, တစ်မဟာဗျူဟာ RPG နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦစစ်ပွဲဂိမ်း။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားကစားသမားတစ်ဦးစစ်တပ်က Build နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖုတ်ကောင်စစ်တပ်နှင့်အတူတစ်ဦးတိုက်ခိုက်စီစဉ်! သင်၏နိုင်ငံသည်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဖုတ်ကောင်နှင့်လူ့ရန်သူများကိုနှစ်ဦးစလုံးတိုက်ဖျက်ဖို့အင်ပါယာမဟာမိတ်များနှင့်မိတ်ဖွဲ့ဖို့။ သင်ကအင်အားအကောင်းဆုံးတပ်မှူးဖြစ်ကြာသောအရာကိုရှိပါသလား
နောက်ဆုံးအင်ပါယာ - War Z တစ်ဖုတ်ကောင်-ရေးရာအခမဲ့-to-play စစစ်မဟာဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လာမည့်ဖုတ်ကောင်စစ်ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့အင်ပါယာကိုကာကွယ်ရန်တိုက်ခိုက်ရေးဖုတ်ကောင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ။ တစ်ခုစစ်တပ်တည်ဆောက်ရန်သင့်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတိုးမြှင့်နှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းကနေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရေးအဖွဲ့တက်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖုတ်ကောင်စစ်ဆင်ရေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါနှင့်သင့်အင်ပါယာကြီးထွားဖို့စစ်တပ်တည်ဆောက်ရန် - ထိုဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပျက်နောက်ဆုံးအင်ပါယာအတွင်းသင်၏လက်၌ရှိ၏ကျန်ရစ်သူ - War Z!
နောက်ဆုံးအင်ပါယာ - War Z Features:
နည်းဗျူဟာစစ်ပွဲဂိမ်းများ & အင်ပါယာကာကွယ်ရေး
* အင်ပါယာအဆောက်အဦဂိမ်း - အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်ဆုကြေးငွေအောင်မြင်ရန်ကစားသမားအားပေးကြောင်းအခြေစိုက်စခန်းအဆောက်အဦမဟာဗျူဟာ!
* In-ဂိမ်းဖြစ်ရပ်များတို့နှင့်ကြီးသောဆုလာဘ်များအတွက်ပုံမှန်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူစိန်ခေါ်မှုများစဉ်အတွင်းတစ်ဖုတ်ကောင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ Build!
ကမ္ဘာကြီးကိုမြေပုံပေါ်တွင်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက် * တိုက်ခိုက်ဖုတ်ကောင်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ chat!
ဖုတ်ကောင် & လူ့တပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူတစ်ကြည်းတပ် Build
* သင်၏ရန်သူတို့ကိုကိုဖကျြဆီးနှင့်သင့်အင်ပါယာခုခံကာကွယ်ဖို့သေစေနိုင်သောဖုတ်ကောင်တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့စစ်တပ် Build!
* မဟာဗျူဟာအရာခပ်သိမ်းသည်။ မတူညီကျွမ်းကျင်မှုသစ်ပင်များကစားသမားသူတို့၏သူရဲကောင်းများမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုပါ။
War Z - ဖုတ်ကောင်တပ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်, တိုက်ပွဲဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပျက်ရှင်သန်နှင့်နောက်ဆုံးအင်ပါယာ၌သင်တို့၏အင်ပါယာခုခံကာကွယ်ဖို့ Build!
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! နောက်ဆုံးအင်ပါယာ - War Z download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။ တစ်ဦးကကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုလည်းလိုအပ်ပါသည်။
န်ဆောင်မှုများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ, နောက်ဆုံးအင်ပါယာ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းများလက်အောက်တွင် - War Z download ပြုလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်သာပုဂ္ဂိုလ်များ 12 နှစ်သို့မဟုတ်အသက်ကျော်ဘို့ကစား။
Last Empire - War Z: Strategy အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Last Empire - War Z: Strategy အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Last Empire - War Z: Strategy အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Last Empire - War Z: Strategy အား အခ်က္ျပပါ
sandro797 စတိုး 96.57k 37.34M
Last Empire - War Z: Strategy ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Last Empire - War Z: Strategy အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.257
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://im30.net/privacy.html
File Size: 177.48MB
Release date: 2019-06-26 05:51:23
လက်မှတ် SHA1: C8:26:AF:AA:53:78:CB:A5:24:D3:F5:B1:90:58:53:B5:71:EB:B5:15
ထုတ်လုပ်သူ (CN): zhangqiang
အဖွဲ့အစည်း (O): AgainstZ
နယ်မြေ (L): BJ
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): BJ
Last Empire - War Z: Strategy APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ